VaTsvangirai Vanoti VaShamu Ngavadzingwe Basa
Mutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, vanoti gurukota rezvekuburitswa kwemashoko, VaWebster Shamu, vanofanirwa kudzingwa basa nekuti vari kuomesa musoro nekuramba kushandura mitemo yekutora nhau, kuburitswa nekufambiswa kwemashoko.
VaTsvangirai vataura mashoko aya pamusangano wekucherechedza zuva reWorld Press Freedom Day rinocherechedzwa musi wa3 Chivabvu wega wega pasi rose.
VaTsvangirai vanoti ivo nemumwe wavo, mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vakawirirana kuti VaShamu vanofanirwa kugadzirisa mabhodhi eZimpapers nereBroadcasting Authority of Zimbabwe, vachitevedza zvinodiwa nechibvumirano cheGlobal Political Agreement, asi VaShamu havasi kuita izvi vachiita zvemusoro wavo.
VaTsvangirai vanotiwo dai VaShamu vari gurukota rakabva kubato ravo, dai vakavadzinga basa nekuti vari kutadza kuita basa nemazvo
Asi VaShamu vachitaurawo pane chimwe chiitikochanga chakarongwa neZimbabwe Media Commission, vanoti vatori venhau vanofanirwa kuita basa ravo nemazvo, kuitira kuti nyika ive nemafungiro akasununguka.
Vatiwo havasi kufara nemanyorerwo ari kuitwa dzimwe nyaya munyika vakayambira kuti zvinhu zvichaomera vanhu vanonyora zvekuzvidza nyika.
Apo nyika yange ichicherechedza World Press Freedom, vatori venhau vechidzimai vashora zvikuru kumbunyikidzwa kunoitwa madzimai mazhinji anoshanda sevatori venhau vakakurudzira zvakanyanya kupedzwa kwedambudziko iri.
Kunyange hazvo vatori venhau vaine basa rakakosha mukuzivisa vanhu zviri kuitika, nzira dzavo dzakazara zvimbambaira zvekuti sangano reReporters Without Borders, rinoti gore rino kune vatori venhau vanodarika makumi maviri nemumwe vakaurayiwa vari pabasa.
Nyika dzinonzi dziri pamberi mukudzvinyirira kodzero dzevatori venhau iSyria neSomalia.
Vamwe vanotiwo nyaya yekupandukirwa kwehurumende dzaitonga nedemo dzakaita seEgypt neTunisia, dziri kupa kuti vatori venhau vambofema mudzimwe nyika.
Asi muZimbabwe hamuna kuwirirana panyaya yemashandiro evatori venhau.
Kunyange hazvo chibvumirano cheGlobal Political Agreement chichiti panofanira kuvandudzwa mabasa ekutora nhau, vamwe vanoti izvi zvichiri zviroto. Zanu-PF inoti pane zviri kuitwa zvinobatika nekuti makambani akaita seZimpapers Talk Radio ne AB Communications akatopihwa marezinesi ekutepfenyura.
Asi veMDC vanoti Zanu-PF yakangopa marezinesi kuhama dzepedyo uye hurumende yemubatanidzwa yakundikana kuunza shanduko.
Mukuru weAB Communications, VaSupa Mandiwanzira, vanoti zvinhu zvave nani munyika munyaya yekutorwa kwenhau zvichitevera kuumbwa kwehurumende yemubatanidzwa.
Asi nyanzvi munyaya dzezve matongerwo enyika, VaPedzisayi Ruhanya, avo vari kuita zvidzo zvepamusorosoro paWestminster University kuLondon, vanoti Zimbabwe ichiri yakaberekera ingwe munyaya dzekutora nhau.